ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး အကြောင်း သိကောင်းစရာ – media sport
Homeဗဟုသုတအထွေထွေပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး အကြောင်း သိကောင်းစရာ
ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ မရှိဘဲ စတင်နိုင်တဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း (၆) မျိုး အကြောင်း သိကောင်းစရာ
တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင်ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ထွန်းကားနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်က American Dream ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ စီးပွားရေးအသိုက်အမြုံကောင်းတစ်ခုကို ရွှေတွင်းတူးသလို တူးချင်တဲ့ လူတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သန်းနဲ့ ချီတဲ့ အမေရိကန်တွေ ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဟာ ရွှေတွင်း၊ ငွေတွင်းတွေ တူးမိလို့ ချမ်းသာခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင်လည်း ချမ်းသာတဲ့သူ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ သူ့ ဦးနှောက်ထဲက ရတနာသိုက်ကို ဖောက်နိုင်ပြီ ဆိုရင်ပေါ့။ သင့် ဦးနှောက်ထဲမှာ ဘယ်လိုရတနာတွင်းရှိသလဲဆိုတာကို ဒီလုပ်ငန်း (၆) ခုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ် နိုင်ပါတယ်။
(၁) အိမ်တွင်းလက်မှု ဖန်တီးချက်လေးများ
တကယ်တော့ လူတိုင်း အမှတ်တမဲ့ နေမိတတ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် ကျွမ်းကျင်တဲ့ အနုပညာစွမ်းရည်လေးတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- ပလတ်စတစ်အမှိုက်ကနေ ဒီဇိုင်းလှပတဲ့ ဖုန်းအိတ်ကလေးတွေ ၊ လွယ်အိတ်လေးတွေနဲ့ ခွက်ကလေးတွေ ဖန်တီး တာမျိုးပါ။ အပြင်ကနေ ကြည့်ရင် ဒါဟာ ဈေးကွက်ဝင် ရောင်းကုန်မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ ဒါဟာ သင့်ရဲ့ မူပိုင်ရောင်းကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက် ထွန်းကားနေတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးမှာ ဖုန်းတစ်လုံး ရှိရုံနဲ့ ကုမ္ပဏီထောင်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ဖန်တီးမှုကို အွန်လိုင်း Shopping platforms တွေကနေ ရောင်းနိုင်သလို နောက်ဆုံး Facebook မှာ Page ထောင်ပြီးတော့တောင် ရောင်းချနိုင်ပါတယ်။.
(၂) အိမ်အကူ ဝန်ဆောင်မှု
နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သိပ်ခေတ်စားတဲ့ အလုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာတော့ သိပ်ပြီး လူသိနည်းသလို အထင်လည်း သေးတဲ့ အလုပ်မျိုးပါ။ တကယ်တော့ ဒီအလုပ်မျိုးက တကယ်လည်း လက်တွေ့ကျသလို ဝင်ငွေကောင်းရနိုင်တဲ့ အလုပ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အနီးနားက အိမ်နီးချင်းရဲ့ကလေး ထိန်းပေးတာ၊ ခွေးကျောင်းပေးတာတို့ အပြင် နောက်ဆုံး အိမ်နီးချင်း ကလေးတွေ ကို အချိန်ပိုင်း စာပြပေးတာကအစ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီအတွက် ပိုက်ဆံတစ်ကျပ်မှ ကုန်စရာ မလိုပါဘူး။
၃) ဟိုဟာ ဒီဟာ ပြင်တယ်
တစ်ချို့ လူတွေက ဝါသနာအလိုက် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းလေးတွေ ပြင်တာ ဝါသနာပါကြပါတယ်။ ဒီလူတွေအတွက်တော့ အသက်ကြီးရင်တောင် အိုးမကွာ အိမ်မကွာ အလုပ်နဲ့ လက် မပြတ်အောင် လုပ်နိုင်လို့အတော်လေး အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံး လက်သမားလုပ်နိုင်လို့ ရပ်ကွက်ထဲက ပရိဘောဂနဲ့ အိမ်တွင်းအသုံးအဆောင်လေးတွေ ပြန်ပြင်မယ်ဆိုရင်တောင် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လုပ်ကိုင်လာပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ဦးအတွက် ဒီအလုပ်ကနေ နားတဲ့ တစ်နေ့ တောင် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ အတွေ့ အကြုံများ အသုံးချပြီး အလားတူ အလုပ်မျိုးမှာ ပြင်ပအတိုင်ပင်ခံအဖြစ် ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလွတ်တန်း အတိုင်ပင်ခံအဖြစ်လည်း လုပ်နိုင်သလို ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းထောင်ပြီးတော့လည်း ကုမ္ပဏီတွေရဲ့ လုပ်ငန်းဆိုင် ရာ အကြံပေး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ပြီး ဝင်ငွေကောင်းနဲ့ ရပ်တည်နိုင်မှာပါ။
အရောင်းအဝယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာဦးစီးပွားရေးပါ။ ဘယ်တော့မှ တိမ်ကောမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုရှိတာက အခုပြောတဲ့ ပြန်ရောင်းတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်အနေနဲ့ ငွေစိုက်ဝယ်ပြီး ပြန်ရောင်းတာမျိုးကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ သစ္စာရှိမှုကို အရင်းတည်ပြီး စက်ရုံတွေ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ပြီး အေးဂျင့်တစ်ယောက်လို အရောင်း အဝယ်လုပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်း ဖြစ်ဖို့ မလိုပါဘူး။
(၆) အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်း
ဒီလုပ်ငန်းမျိုးက ကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ အရပ်ဒေသအလိုက် အသေးစား စီးပွားရေး လုပ်စရာပေါပါတယ်။ နောက်ဆုံး ကိုယ်က ကားမောင်းတတ်တယ်ဆိုရင် အခု အက်ပလီကေးရှင်းနဲ့ ကားခေါ်လို့ ရတဲ့ Grab တို့ Uber တို့ မှာ သွားပြီး ယာဉ်မောင်း ဝန်ဆောင်မှု လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကနေမှ ရတဲ့ ငွေကြေးကို စုဆောင်းပြီး ကားနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းသေးသေးလေးတွေ ထောင်လို့ ရပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက ဒီလုပ်ငန်းမျိုးက startup ဖြစ်တဲ့အတိုင်း အရင်းအနှီးနဲ့ နည်းပညာလိုပါတယ်။ ဒီအတွက်တော့ အချိန်ပေး လေ့လာပြီး စနစ်တကျ စီးပွားရှာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုကျဆံတဈကပျြမှ မရှိဘဲ စတငျနိုငျတဲ့ စီးပှားရေး လုပျငနျး (၆) မြိုး
တကယျတော့ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ မူပိုငျရောငျးကုနျဖွဈပါတယျ။ အငျတာနကျ ထှနျးကားနတေဲ့ ဒီခတျေကွီးမှာ ဖုနျးတဈလုံး ရှိရုံနဲ့ကုမ်ပဏီထောငျနိုငျပါတယျ။
တဈခြိနျက American Dream ဆိုတဲ့ စကားတဈခှနျးဟာ စီးပှားရေးအသိုကျအမွုံကောငျးတဈခုကို ရှတှေငျးတူးသလို တူးခငျြတဲ့ လူတှအေတှကျ မြှျောလငျ့ခကျြတဈခု ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ သနျးနဲ့ခြီတဲ့ အမရေိကနျတှေ ခမျြးသာကွှယျဝခွငျးဟာ ရှတှေငျး၊ ငှတှေငျးတှေ တူးမိလို့ခမျြးသာခဲ့တာ မဟုတျပါဘူး။
သငျလညျး ခမျြးသာတဲ့သူ ဖွဈနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့သူ့ဦးနှောကျထဲက ရတနာသိုကျကို ဖောကျနိုငျပွီ ဆိုရငျပေါ့။ သငျ့ ဦးနှောကျထဲမှာ ဘယျလိုရတနာတှငျးရှိသလဲဆိုတာကို ဒီလုပျငနျး (၆) ခုနဲ့နှိုငျးယှဉျသုံးသပျ နိုငျပါတယျ။
(၁) အိမျတှငျးလကျမှု ဖနျတီးခကျြလေးမြား
တကယျတော့ လူတိုငျး အမှတျတမဲ့ နမေိတတျတဲ့ တဈကိုယျရညျ ကြှမျးကငျြတဲ့ အနုပညာစှမျးရညျလေးတှေ ရှိတတျပါတယျ။ ဥပမာ- ပလတျစတဈအမှိုကျကနေ ဒီဇိုငျးလှပတဲ့ ဖုနျးအိတျကလေးတှေ ၊ လှယျအိတျလေးတှနေဲ့ခှကျကလေးတှေ ဖနျတီး တာမြိုးပါ။ အပွငျကနေ ကွညျ့ရငျ ဒါဟာ ဈေးကှကျဝငျ ရောငျးကုနျမဟုတျဘူးလို့ထငျပါလိမျ့မယျ။
တကယျတော့ ဒါဟာ သငျ့ရဲ့ မူပိုငျရောငျးကုနျဖွဈပါတယျ။ အငျတာနကျ ထှနျးကားနတေဲ့ ဒီခတျေကွီးမှာ ဖုနျးတဈလုံး ရှိရုံနဲ့ကုမ်ပဏီထောငျနိုငျပါတယျ။ သငျ့ရဲ့ ဖနျတီးမှုကို အှနျလိုငျး Shopping platforms တှကေနေ ရောငျးနိုငျသလို နောကျဆုံး Facebook မှာ Page ထောငျပွီးတော့တောငျ ရောငျးခနြိုငျပါတယျ။.
(၂) အိမျအကူ ဝနျဆောငျမှု
နိုငျငံရပျခွားမှာ သိပျခတျေစားတဲ့ အလုပျတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ ဒီမှာတော့ သိပျပွီး လူသိနညျးသလို အထငျလညျး သေးတဲ့ အလုပျမြိုးပါ။ တကယျတော့ ဒီအလုပျမြိုးက တကယျလညျး လကျတှကေ့သြလို ဝငျငှကေောငျးရနိုငျတဲ့ အလုပျလညျး ဖွဈပါတယျ။
ကိုယျ့အနီးနားက အိမျနီးခငျြးရဲ့ကလေး ထိနျးပေးတာ၊ ခှေးကြောငျးပေးတာတို့အပွငျ နောကျဆုံး အိမျနီးခငျြး ကလေးတှေ ကို အခြိနျပိုငျး စာပွပေးတာကအစ လုပျလို့ရပါတယျ။ ဒီအတှကျ ပိုကျဆံတဈကပျြမှ ကုနျစရာ မလိုပါဘူး။
၃) ဟိုဟာ ဒီဟာ ပွငျတယျ
တဈခြို့လူတှကေ ဝါသနာအလိုကျ လြှပျစဈပစ်စညျးလေးတှေ ပွငျတာ ဝါသနာပါကွပါတယျ။ ဒီလူတှအေတှကျတော့ အသကျကွီးရငျတောငျ အိုးမကှာ အိမျမကှာ အလုပျနဲ့လကျ မပွတျအောငျ လုပျနိုငျလို့ အတျောလေး အဆငျပွမှော ဖွဈပါတယျ။ နောကျဆုံး လကျသမားလုပျနိုငျလို့ရပျကှကျထဲက ပရိဘောဂနဲ့အိမျတှငျးအသုံးအဆောငျလေးတှေ ပွနျပွငျမယျဆိုရငျတောငျ အလုပျဖွဈပါတယျ။
အလုပျတဈခုမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာ လုပျကိုငျလာပွီး ကြှမျးကငျြတဲ့ ဝနျထမျးကောငျးတဈဦးအတှကျ ဒီအလုပျကနေ နားတဲ့ တဈနတေ့ောငျ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ အတှအေ့ကွုံမြား အသုံးခပြွီး အလားတူ အလုပျမြိုးမှာ ပွငျပအတိုငျပငျခံအဖွဈ ဝနျဆောငျမှု ပေးနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
အလှတျတနျး အတိုငျပငျခံအဖွဈလညျး လုပျနိုငျသလို ကိုယျပိုငျ လုပျငနျးထောငျပွီးတော့လညျး ကုမ်ပဏီတှရေဲ့ လုပျငနျးဆိုငျ ရာ အကွံပေး ဝနျဆောငျမှုလုပျပွီး ဝငျငှကေောငျးနဲ့ရပျတညျနိုငျမှာပါ။
အရောငျးအဝယျဆိုတာ ကမ်ဘာဦးစီးပှားရေးပါ။ ဘယျတော့မှ တိမျကောမှာလညျး မဟုတျပါဘူး။ တဈခုရှိတာက အခုပွောတဲ့ ပွနျရောငျးတယျဆိုတာ ကိုယျ့အနနေဲ့ငှစေိုကျဝယျပွီး ပွနျရောငျးတာမြိုးကို ပွောတာ မဟုတျပါဘူး။ ကိုယျ့ရဲ့ လုပျငနျး ကြှမျးကငျြမှုနဲ့သစ်စာရှိမှုကို အရငျးတညျပွီး စကျရုံတှေ ကုမ်ပဏီတှနေဲ့တိုကျရိုကျခြိတျပွီး အေးဂငျြ့တဈယောကျလို အရောငျး အဝယျလုပျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီအတှကျ ကုမ်ပဏီဝနျထမျး ဖွဈဖို့မလိုပါဘူး။
(၆) အသေးစားစီးပှားရေး လုပျငနျး
ဒီလုပျငနျးမြိုးက ကယျြပွနျ့ပါတယျ။ အရပျဒသေအလိုကျ အသေးစား စီးပှားရေး လုပျစရာပေါပါတယျ။ နောကျဆုံး ကိုယျက ကားမောငျးတတျတယျဆိုရငျ အခု အကျပလီကေးရှငျးနဲ့ကားချေါလို့ရတဲ့ Grab တို့Uber တို့မှာ သှားပွီး ယာဉျမောငျး ဝနျဆောငျမှု လုပျနိုငျပါတယျ။
ဒီကနမှေ ရတဲ့ ငှကွေေးကို စုဆောငျးပွီး ကားနဲ့ဆကျစပျတဲ့ ခရီးသှားလုပျငနျးသေးသေးလေးတှေ ထောငျလို့ရပါတယျ။ တဈခုရှိတာက ဒီလုပျငနျးမြိုးက startup ဖွဈတဲ့အတိုငျး အရငျးအနှီးနဲ့နညျးပညာလိုပါတယျ။ ဒီအတှကျတော့ အခြိနျပေး လလေ့ာပွီး စနဈတကြ စီးပှားရှာရမှာ ဖွဈပါတယျ။
အဖိုးဦးသန်းရွှေရဲ့ ငယ်ဘဝပုံလေးတွေ ထုတ်ပြလိုက်တဲ့ နေရွှေသွေးအောင်
ဒီ ပို့ ကို တွေ့ ခွင့် ဖတ် ခွင့် ရ သူ တိုင်း မိမိ သည် မဟာ ကံထူး ရှင်ဖြစ်ေ နကြောင်း သိခွင့် ရ ပါ လိမ့် မည်
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ စွယ်တော်ကို သိပ္ပံပညာရှင်များ စမ်းသပ်စစ်ဆေးချက် ရပ်ဆိုင်းခံရ